June 2018 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
သုတေသနအသစ်တစ်ခုအရအမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ (T2DM)သုံးတဲ့ဆေး တစ်မျိုးကအရက်ကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ (NAFLD) ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ သူတွေမှာအသည်းပေါ်ကအဆီပမာဏလျော့ကျစေပြီး၊ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို ပါလျော့ကျစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသွေးချိုဝေဒနာသည်တွေ မှာ NAFLD အဖြစ်များပြီး ပြင်း ထန်အသည်းရောဂါတွေထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
သုတေသန တွေ့ရှိချက်တွေအရသက်လတ်ပိုင်း ဆီးချိုသွေးချိုဝေဒနာ ရှင်တွေမှာ ဆီးချိုသွေးချိုဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ empagliflozin ကိုသောက်နေသူတွေကကုသမှုစတင်ပြီး ရက်သတ္တပတ် ၂၀ ခန့်အကြာတွင် အသည်းပေါ်မှအဆီ ၁၆.၂% မှ ၁၁.၃ % လောက်ထိလျော့ကျသွား တာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး၊ ထိန်းချုပ်စောင့် ကြည့်အုပ်စုမှာတော့မူလ ၁၆.၄ % မှ ၁၅.၆ % ထိသာအနည်း ငယ်လျော့ကျခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ NAFLD ပြီးနောက်ဆက် လက်ဖြစ်ပွားတဲ့ အရက်ကြောင့် မဟုတ်ပဲအဆီကြောင့်အသည်းရောင်ရမ်းမှု Non. alcoholic Steatohepatitis (NASH) က အသည်းခြောက်ခြင်း နဲ့ အသည်း ကင်ဆာတို့ပါဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ NAFLD နဲ့ NASH အခြေအနေတို့အတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ သီးသန့်ကုထုံးတွေမရှိ သေးပဲ metformin, pioglitazone နဲ့ဗီတာမင်အီး တို့ကလည်း အသည်းပေါ်ကအဆီကိုအနည်း ငယ်သာလျော့ကျစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် Empagliflozin က NAFLD အခြေအနေကို ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ သုတေသီတွေက အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သုတေသနတွေမှာလည်း Empagliflozin က ကြွက်တွေရဲ့အသည်းပေါ် က အဆီပမာဏကိုလျော့ကျစေတာသက်သေပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုသုတေသနမှာအသက် ၄၀ အထက်အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ NAFLD အခြေအနေခံစားနေရသူတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပါဝင်သူတွေကို ကျပန်းခွဲပြီး တစ်ဖွဲ့ကိုစံကုထုံးနဲ့ empagliflozin တစ်ရက်ကို 10 mg ပေး၍ကျန် တစ်ဖွဲ့ကိုစံကုထုံးသာပေးခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ empagliflozin သောက်တဲ့ အုပ်စုကအသည်းပေါ်မှအဆီပမာဏ ၄.၉ % လျော့ကျခဲ့ပြီး ကျန်အုပ်စုကတော့ ၀.၈ % သာလျော့ကျခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ Empagliflozin ကို FDA မှ ၂၀၁၄ က ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
Eindhoven University of Technology သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကော်ဖီစစ်စက္ကူ (Coffee Filter) ကိုအသုံးပြုပြီး ပိုမိုဈေးသက်သာတဲ့ကင်ဆာဆေးထုတ်လုပ်နိုင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ ၎င်းင်းတို့ရဲ့နည်း ပညာကိုအသုံးပြုပြီး Z-endoxifen ကင်ဆာကုသဆေးကို ပိုမိုဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ Tamoxifen က ရင်သားကင်ဆာကုသရာမှာသုံး တဲ့ကမ္ဘာသုံးဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဆေးကအမြဲတမ်းတော့သက်ရောက်မှုကောင်းတွေမရစေပါဘူး။
Tamoxifen အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ရိုက် တိုက်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ Z-endoxifen အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမှသာ တိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ Tamoxifen ကနေ Z-endoxifen ကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့ပမာဏက လူနာရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းအများကွဲပြားပြန်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ Z-endoxifen ကိုဆေးအနေနဲ့ တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ မျိုးရိုးဗီဇကွဲပြားမှုတွေကို လျစ်လျူရှုနိုင်ပြီး ဆေးပမာဏကိုလည်း လျော့ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း ပိုနည်းစေနိုင်မယ်လို့ US စမ်းသပ်ကုသမှုတွေ က သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Z-endoxifen ထုတ်လုပ်မှုမှာကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲကကုန်ကျစရိတ် အလွန်များနေတာဖြစ်ပြီး၊ ၁ ဂရမ်ရရှိဖို့အတွက် ဒေါ်လာတစ်သောင်းလောက်ကုန်ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုသုတေသနမှာသိပ္ပံပညာ ရှင်တွေက လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့ High Pressure Liquid Chromato-graphy (HPLC) နည်းပညာအသုံး ပြုပြီး သန့်စင်တဲ့စနစ်ကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်မဲ့နည်းလမ်းကို တွေ့ရှိခဲ့ပါ တယ်။ လက်ရှိ endoxifen ထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်က Z နဲ့ E ဆိုပြီး endoxifen နှစ်မျိုးကို ၇၀း ၃၀ အချိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ HPLC နည်းကမလိုချင်တဲ့ E-endoxifen ၃၀% ကို ဖယ်ရှား ပေးဖို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ Eindhoven မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်မှာလိုချင်တဲ့ Z-endoxifen ကို ၉၅% နဲ့မလိုချင်တဲ့ E-endoxifen ကို ၅% ထိလျော့ချပေးနိုင်မဲ့နည်းကို တွေ့ရှိ ခဲ့ပြီး၊ မလိုချင်တဲ့ E-endoxifen ၅% ကိုကော်ဖီစစ်စက္ကူသုံးပြီး စစ် ထုတ်ဖယ်ရှားပေးနိုင်မဲ့နည်းကို တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယင်းနည်းသစ်ကသန့်စင်တဲ့ Z-endoxifen ထုတ်လုပ်ရာမှာပိုမိုထိရောက်ပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်မှာလည်း အဆ ၁၀၀၀ လောက်ပိုသက်သာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ကော်ဖီသောက်လိုက်ရင် သောက်ထားတဲ့အရက်ရှိန် မူးနေတာပြေသွားမယ်လို့ယူဆချက်ဟာ နားထောင်ရင် အဟုတ်လို့ ထင်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာမှုတွေလုပ်ကြည့်တော့ အဲလိုမဟုတ်ပါ။
အရက်ဆိုတာ များလေလေ Sedative effects အိပ်ချင်စိတ်များလေလေဆိုတာ လူတိုင်း သိတဲ့အချက်ပါ။ ပဌမ ၁ နာရီခွဲအတွင်းမှာ သွေးထဲမှာ အရက်ပမာဏ များနေချိန်မယ် အရက်သောက်သူဟာ တက်ကြွနေပါတယ်။ ၂ နာရီ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ၆ နာရီ အထိ အိပ်ချင်စိတ်ဟာ တိုးတိုးလာပါတယ်။
ကော်ဖီထဲမှာပါတဲ့ Caffeine ကေဖင်းဓါတ်ကတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကို တက်ကြွနေစေပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့် ဘီယာတပိုင့်သောက်ပြီး ကော်ဖီတခွက်နဲ့ဖြေတာ သဘာဝကျပါတယ်။
စိတ်မကောင်းစရာ လာပါပြီ။ အရက်သုတေသနသမိုင်းမှာ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေထဲ အရက်သောက်ထားသူတွေကို ကော်ဖီ တိုက်ပြီး စမ်းသပ်တဲ့အခါ အဖြေတွေက ဆန့်ကျင်တာတွေ ထွက်လာပါတယ်။ တချို့မှာ အရက်ကြောင့် ပြန်လည် တုန့်ပြန်နိုင်တဲ့ ကြားကာလအချိန်ဟာ ကော်ဖီကြောင့် တိုးလာပေမဲ့ တချို့ ဘာမှမထူးပါ။
ဒါကြောင့် ကော်ဖီဟာ အရက်ကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ မောပမ်းမှုကို တန်ပြန်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စာ၊ ညစာစားပြီးဆိုင်း ကော်ဖီနဲ့ အစာပိတ်တဲ့သဘောက မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ Cognitive deficits မှတ်သားမှု-ဥာဏ်ထုတ်မှုအစွမ်း နည်းပါးနေတာကိုတော့ ကော်ဖီကနေ ဖျောက်မပေးနိုင်ပါ။ Drunkenness feelings အရက်သမားခံစားမှုဆိုတာ အဲဒါပါ။
ဇီဝကမ္မ၊ ရောဂါဗေဒလိုပြောရရင် အရက်ကို ကိုယ်ခန္ဓာနေ ချက်လုပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် နေ့ရက်တွေ မနည်းမနော ယူပါမယ်။ ဒီအလုပ်အတွက် အသဲက အင်ဇိုင်းမ် ၂ မျိုးသုံးရပါတယ်။ Alcohol dehydrogenase အယ်လ်ကိုဟော ဒီဟိုက်ဒရိုဂျင်နေ့စ် နဲ့ Aldehyde dehydrogenase အယ်လ်ဒီဟိုက် ဒီဟိုက်ဒရိုဂျင်နေ့စ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်တွေ အဆင့်တွေ အများကြီးအပြီးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေတုံးက သောက်ထားတဲ့ အရက်ဟာ ရေနဲ့ Carbon dioxide ကာဗွန်အောက်ဆိုက်အဖြစ် ချွေးနဲ့ ဆီးထဲကနေ စွန့်ထုတ်ပါတယ်။
အရက်တယူနစ် (10 ml in UK = 10 grams [12.7 ml] in Australia) ကို (မက်တာဘော်လိုက်စ်) ချက်လုပ်ဘို့ရာ ၁ နာရီပျမ်းမျှ အချိန်ယူပါတယ်။ မျိုးဗီဇ၊ အစာစားထားမထား၊ အရက်ရာနှုန်းတွေအရ အနှေးအမြန် ကွာပါမယ်။ ကော်ဖီထဲမှာပါတဲ့ ကေဖင်းကနေ ဒီဖြစ်စဉ်ကို မြန်စေအောင် မလုပ်နိုင်ပါ။ နောက်ထပ် သုတေသနအရ (ကေဖင်း) များတာကနေ အရက်ကြောင့် မှတ်ဥာဏ်ကို သက်ရောက်တာကို တန်ပြန်နိုင်တယ်။ Dizziness မူးနောက် နေတာကိုတော့ မပြေစေဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒီသတင်းပို့ချက်ကိုရေးသူ Claudia Hammond ကလော်ဒီယာဟာ စာရေးသူ၊ အသံလွှင့်သူ၊ စိတ်ပညာကထိက ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဘီဘီစီ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း တင်ဆက်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ၄၅ နှစ်။ ယောက်ျား။ uric acid 10.9 alkaline phosphates 110 Alt 69 Ast 129 Gamma-gt 338 ဆရာ အသည်းယေဘုယျအခြေအနေကိုသိနိုင်ပါသလား။ အရက်အလွန်သောက်ပါသည်။
၂။ ဆရာကျွန်တော့ယောက်ဖက အသက် ၄၀ ပါ။ အရက်သောက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တလကမှအရက်ဖြတ်ပါတယ်။ မနေ့ကဖျားပြီး ဂယောင်ဂတမ်းတွေပြောပါတယ်။ ရင်ထဲကပူတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ ခုမန်းလေးဆေးကြီးမှာ တင်ထားပါတယ်။ အာထွာဆောင်းရိုက်တော့ ALCOHOLIC HEPATITIS လို့ရေးထားပါတယ်။ စိုးရိမ်ရလားဆရာ။ ဘာရောဂါပါလဲဆရာ။ ဘယ်လိုနေထိုင်ပြုမူပြီးဘယ်လိုစားသောက်တွေစားလို့ရပါလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးညွန်ကြားပေးပါဆရာ။
အရက်သောက်တာများလေလေ အသည်းကိုထိခိုက်လေဖြစ်တယ်။ ရေတိုနဲ့ ရေရှည်သက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပါမယ်။ အရက်ဟာ သက်ရှိတွေအတွက် အဆိပ်ဖြစ်တယ်။ အသည်းရောဂါ (၃) မျိုးကိုဖြစ်စေမယ်။
(၁) Fatty liver အသည်းအဆီဖုံးခြင်း၊
(၂) Alcoholic hepatitis အရက်အသည်းရောဂါနဲ့
(၃) Cirrhosis အသည်းခြောက်တာတွေ ဖြစ်တယ်။
Fatty liver အဆီဖုံးနေသူဟာ ၃ လကနေ ၆ လကြာရင် ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ အသက်ဆက်ရှည်ချင်ရင် အရက်ဖြတ်လိုက်ပါ။ အရက်သောက်တာကြာသူတိုင်းရဲ့ အသည်းမှာ Fat globules အဆီလုံးလေးတွေဖြစ်လာမယ်။ ကြာလာရင် Hepatitis အသည်းရောင်လာမယ်။ Hepatomegaly အသည်းအရွယ်အစားကြီးလာရင် ဝမ်းဗိုက် ညာဘက် အထက်ပိုင်းနေရာမှာ နာမယ်။ တင်းနေမယ်။ အဲလိုဖြစ်နေတာ ၁ဝ နှစ်ရှိသူဆိုရင် ပျို့ချင်၊ အန်မယ်၊ ကိုယ်အလေးချိန် ကျမယ်။ ကိုယ်ပူနိုင်တယ်။ အသား-ဆီးဝါမယ်။ ဗိုက်ထဲအရည်အောင်းလို့ ဖေါင်းလာမယ်။
Cirrhosis အသည်းခြောက်တယ်ဆိုတာ အသည်းမှာအမာရွတ်ဖြစ်တာပါ။ ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ပါ။ အသည်းခြောက်နေပေမဲ့ ဘာမှ မခံစားရသူတွေလဲရှိတယ်။ အစားအသောက်ပျက်တာ၊ အားယုတ်တာသာရှိတယ်။ ကြွက်သားတွေ လှီလာမယ်။ ဆိုးလာရင်တော့ Varicose veins သွေးပြန်ကြောတွေထုံးလာမယ်။ အပြင်ကမမြင်ရတဲ့ ဗိုက်ထဲကအစာခြေလမ်းကြောင်းမှာ ဖြစ်တယ်။ ပေါက်ထွက်ရင် သွေးယိုမယ်။ ချက်ချင်းမကုနိုင်ရင် သေနိုင်တယ်။ အသည်းခြောက်နေသူ ၂ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က ၅ နှစ်နေရင် အသည်းအလုပ်မလုပ်နိုင်လို့သေဆုံးရတယ်။ ၁ဝ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ကအသည်းကင်ဆာဖြစ်မယ်။ Liver failure အသည်းကအလုပ်နိုင်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ရင် Coma သတိလစ်မယ်။ သေဆုံးမယ်။
ယောက်ျားတွေက တနေ့မှာ အရက် ၄ဝ-၈ဝ ဂရမ်၊ မိန်းမတွေက တနေ့မှာ ၂ဝ-၄ဝ ဂရမ်၊ ၁ဝ-၁၂ နှစ်သောက်ရင် တခြားအသည်းရောဂါ ဘာမှမရှိဘဲ အသည်းပျက်စီးတာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Oesophageal or Gastric variceal bleeding အစာလမ်းကနေ သွေးယိုမယ်၊ Ascites ရေဖျင်းစွဲမယ်၊ Coagulopathy သွေးမခဲတာဖြစ်မယ်၊ Hepatic encephalopathy ဦးနှောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်၊ Liver cancer အသည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်။
အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ မူးယစ်ဆေးတွေမှာ စွဲစေတတ်တဲ့သဘောပါတယ်။ မဌမဆုံး အမူအကျင့်က အဲတာမျိုးကို လုပ်ချင်နေမယ်။ နောက် တိုးလုပ်ချင်တာမယ်။ နောက် အဲတာကိုတောင့်တနေမယ်။ နောက်စွဲမယ်။ လူတဦးချင်းတော့ အခံမတူကြပါ။ အရက်အကြောင်းစာတွေရေးထားတာမနည်းပါ။ ဖတ်တာနဲ့တောင်မူးလောက်တယ်။
၀ါတာလူးတက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေက အမျိုးသမီးများတွင်ံHIV ပိုးကူးစက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေး နိုင်မဲ့ကိရိယာသစ်ကို တီထွင်ခဲ့ကြပါ တယ်။ သမားရိုးကျ HIV ကာကွယ် နည်းတွေဖြစ်တဲ့ ကွန်ဒုံတွေ၊ HIV ဆန့်ကျင်ဆေးတွေနဲ့ မတူပဲ၊ ကိရိယာ သစ်က လူရဲ့ သဘာဝခုခံအားစနစ် ကို အသုံးချပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ် ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ HIV ပိုး က လူ့ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားစနစ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ T ဆဲလ်တွေကို ထိခိုက် စေတာဖြစ်ပါတယ်။
T ဆဲလ်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ခိုက်ဖို့မလုပ်ရင်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရှိလာမှာမဟုတ်ပဲ လူအချင်းချင်းကြား ကူးစက်မှုဖြစ်လာ မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ T ဆဲလ်တွေ လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အခြေအနေကို ခုခံ အားစနစ် ငြိမ်သက်နေတဲ့အခြေ အနေလို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သိထားသလိုပါပဲ။ တချို့သောက် ဆေးတွေက မွေးလမ်းကြောင်း၊ မိန်းမ ကိုယ်တို့ထိ မရောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ယခုကိရိယာသစ်က မိန်းမကိုယ်ထဲ မြှုပ်နှံထားရုံနဲ့ T ဆဲလ်တွေကို ဗိုင်းရပ်စ်အား မတုန့် ပြန်ဖို့ ထိန်းထားပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုစိတ်ချရကာ ပိုလည်း စရိတ်စက သက်သာစေပါတယ်လို့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ယင်းမိန်းမကိုယ် တွင်းမြှုပ်ထားရတဲ့ ကိရိယာကို ကင်ညာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သုတေသနက အတွေးအခေါ်ရလာတာပါ။ ယင်း သုတေသနမှာ ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးအများပြားက HIV ပိုးရှိတဲ့ အမျိုးသားဖောက်သည်တွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံပေမဲ့ HIV ပိုး ကူးစက်မ ခံရတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆက်လက်လေ့လာ ကြည့်တဲ့အခါ ယင်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ T ဆဲလ်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်ကို တုန့်ပြန် မှုမရှိတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ယင်း အချက်ကို တွေ့ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့တာက ဆေးဝါးတွေသုံးပြီးတော့ရော ခုခံအား စနစ်ကို တက်ကြွမှုမရှိအောင်လုပ်လို့ မရဘူးလားဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဆေးကို မိမိလိုအပ်တဲ့နေရာကို တိုက်ရိုက် ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ခုခံအားစနစ်ကို ပိုပြီးထိထိရောက် ရောက် ချုပ်ကိုင်နိုင်မှာပဲလို့ တွက်ဆ ပြီး ယခုကိရိယာကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိရိယာသစ်မှာ ပြွန် ငယ်လေးတစ်ခုနဲ့ ကွေးဆန့်နိုင်ပြီး ထည့်ထားတဲ့နေရာမှာ မြဲအောင်ထိန်း ထားမဲ့ လက်မောင်းလေးနှစ်ခု ပါပါ တယ်။ ဆေးအနေနဲ့ hydroxy- chloroquine ပါဝင်ပြီး ပြွန်အပေါက် လေး များမှတဆင့် တဖြည်းဖြည်း ထုတ်ပေးကာ၊ မိန်းမကိုယ်နံရံကနေ တိုက်ရိုက်စုပ်ယူပြီး T ဆဲလ်တွေရဲ့ တက်ကြွမှုကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တာ တွေ့ခဲ့ရပါ တယ်။
ဂနိုရောဂါဆိုတာ လိင်ဆက်ဆံ ခြင်းကနေ ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါ တစ်မျိုးပါ။ Neisseria gonorrhoeae လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုး ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ရောဂါပိုးတွေ ကို အဓိကအားဖြင့် အမျိုးသားများ ရဲ့သုတ်ရည်၊ အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ် အတွင်းမှလာသော အရည်များမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
၂။ ဂနိုရောဂါက ဘယ်လိုကူးစက် တတ်လဲ။
ဂနိုရောဂါဟာ ကျားအင်္ဂါ၊ မအင်္ဂါ၊ ပါးစပ်၊ စအိုတွေနဲ့ အကာ အကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ၊ လိင် ဆက်ဆံခြင်းအတွက် အသုံးပြုတဲ့ (တခြားလူသုံးထားတဲ့) sex toys, vibrators (လိင်ဖြေဖျော်မှုပစ္စည်း များ)တွေကို သေချာမဆေးဘဲ၊ အကာအကွယ်မဲ့အသုံးပြုတာတွေက နေ ကူးစက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဂနိုပိုးဟာ သားအ်ိမ်ခေါင်း၊ ဆီးပြွန်၊ စအို၊ တစ်ခါတရံ အာခေါင်နဲ့ မျက်လုံးတွေမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေါက်ပွားနေထိုင်တတ်သောပိုးများ ဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူ ရောဂါလက္ခ ဏာမပြတတ်ပါဘူး။ ဂနိုရောဂါက မိခင်မှာရှိနေခဲ့ရင် သူမက မွေးဖွား လာမယ့် ကလေးငယ်ဆီကိုလည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ကို ကူးစက်ခဲ့ရင် တစ်သက်လုံး မျက်စိကွယ်တဲ့ အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်သည်တွေအနေနဲ့ ကလေးမ မွေးဖွားခင် မိမိမှာ ဂနို ရောဂါရှိမရှိစစ် ဆေးဖို့လိုအပ်ပြီး အခ်ျိန်မီကုသဖို့လို အပ်ပါတယ်။
၃။ဂနိုရောဂါက ပွေ့ဖက်တာကနေ ကူးပါသလား။
ဂနိုရောဂါပိုးက လူ့ခန္ဓာကိုယ် ပြင်ပမှာ ကြာရှည်စွာအသက်မရှင်နိုင် တာမို့ နမ်းရှိုက်တာ၊ ပွေ့ဖက်တာ၊ ရေအတူချိုးတာ၊ အိမ်သာတစ်လုံးထဲ အတူသုံးတာ၊ ထမင်းအတူစားတာ တွေကနေ မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။
ဂနိုရောဂါဟာ ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး အမျိုးသားတွေမှာ၂ ရက်၊ ၃ ရက် အတွင်း လက္ခဏာပြလာတတ်ပါ တယ်။ တချို့အမျိုးသားတွေမှာတော့ ၁၀ ရက် မှ ၁၅ ရက် အထိ ကြာပြီးမှ ရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ်လာတတ် ပါတယ်။ အဓိကတွေ့ရှိရတဲ့ လက္ခ ဏာတွေကတော့ ဆီးလမ်းကြောင်း ထိပ်ဝမှ အ၀ါရောင်ပြည်များ (အဖြူနှစ်ခပ်ပျစ်ပျစ်-ခပ်ဝါ၀ါ သို့ အစိမ်းရောင်များ) ထွက်လာပြီး လိင်တံထိပ်သည် နီရဲ၍ ရောင်လာ သည်အထိ ခံစားလာရခြင်း (ညောင်း ကျခြင်း) ဆီးသွားစဉ် နာကျင်ခြင်း၊ ပူစပ်ခြင်း။ ဆီးအောင့်ခြင်း။ ဆီး ကြိတ်ရောင်ခြင်း။ ဝှေးစေ့များနာခြင်း (သို့) ရောင်ခြင်း။ မည်သည့်လက္ခဏာ မှမပေါ်ခြင်း (၁၀%)။
ဂနိုရောဂါပိုးဟာ အမျိုးသမီး တွေရဲ့ လိင်အင်္ဂါအတွင်းပိုင်းမှာရှိနေ တတ်ပေမယ့် အလွယ်တကူရောဂါ လက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။ ရောဂါပိုး ၀င်ရောက်ပြီး ရက်ပေါင်းများစွာ၊ လပေါင်းများစွာကြာမှ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ပြလာတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ မွေး လမ်းကြောင်း (သို့) စအိုမှ အ၀ါ ရောင် (သို့) အဖြူရောင် (သို့) အစိမ်း ရောင် အရည်များဆင်းခြင်း။ ဆီး သွားရာတွင် နာကျင်ခြင်း၊ ပူလောင် ခြင်း။ ဆီးမကြာခဏသွားခြင်း။ အဖျားတက်ခြင်း။ ဗိုက်အောက် ပိုင်းနာခြင်း။ လိင်ဆက်ဆံချိန်တွင်နာ ခြင်း (သို့) သွေးထွက်ခြင်း။ ကြားရက် မှာ သွေးဆင်းခြင်း။ မည်သည့် လက္ခဏာမှ မပေါ်ခြင်း (၅၀%)။
တကယ်လို့ ရောဂါပိုးပါရှိတဲ့ သုတ်ရည်၊ အမျိုးသမီးအင်္ဂါမှထွက် လာတဲ့အရည်တွေ မျက်လုံးထဲဝင် သွားရင် မျက်လုံးရောင်ရမ်းတာ၊ နေရခက်တာ၊ နာကျင်တာ၊ မျက်ဝတ် ထွက်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စအို ထဲမှာ ပိုးတွေဝင်ရောက်ခဲ့ရင် မအီမ သာဖြစ်တာ၊ စအိုအတွင်းမှ ပြည်ရည် တွေဆင်းတာ၊ နာကျင်တာတွေဖြစ် တတ်ပါတယ်။ ရောဂါရှိတဲ့မိခင်ကနေ မွေးဖွားလာမယ့်ကလေးကို မွေးဖွား နေစဉ် ကူးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ် တွေကိုကူးစက်ခဲ့ရင် မွေးဖွားပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း မျက်စိနာလာမယ်၊ ခပ်ပျစ်ပျစ်-ခပ်ဝါ၀ါမျက်ဝတ်တွေ ထွက်လာမယ်။ အချိန်မီမကုသရင် မျက်စိကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အထက်ပါရောဂါ လက္ခဏာတွေကို ခံစားနေရရင် နီးစပ်ရာဆရာဝန်နဲ့ ပြပါ။ ရောဂါ ဆိုတာ ကုသဖို့ပါ။ ရှက်ကြောက် နေတာနဲ့ မကုသဘဲထားတဲ့အခါ သို့ အပေါင်းအသင်းတွေပြောတဲ့ဆေးကိုပဲသောက်တာ သို့ ဆေးမြီးတိုတွေနဲ့ ကြိတ်ပြီးကုသနေတဲ့အခါ ဆိုးကျိုး များစွာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ တခြားလူတွေကိုပါ ကူးစက်နိုင်ပါ တယ်။ လိုအပ်ပါက တခြားစစ်ဆေး စမ်းသပ်မှုတွေ ထပ်လုပ်ရပါမယ်။ ဆေးထိုးသို့ ဆေးသောက်တဲ့အခါမှာ လည်း မိမိရဲ့လိင်ဆက်ဆံဘက်ပါ အတူကုသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဂနိုရောဂါက ဆေးတစ်လုံးထိုးတာ သို့ ဆေးသောက်တာနဲ့တင် ပျောက် ကင်းနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်လို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားပါက ဆေးပတ် လည်အောင်သောက်ဖို့ ဆေးထိုးဖို့လို အပ်ပါတယ်။
ဂနိုပိုးနဲ့ အတူ ကလာမိုင်ဒီယား ပိုးလည်း တွဲရှိနေတတ်လို့ ဆေးတိုက်
တဲ့အခါ ဆရာဝန်တွေက ရောဂါနှစ် မျိုးလုံးအတွက် တွဲပေးတတ်ပါတယ်။ ဆေးကုနေစဉ်မှာ လိင်ဆက်ဆံမယ် ဆိုရင် အကာကွယ်မသုံးဘဲ အတူမ နေသင့်ပါဘူး။ ဂနိုပိုးကူးစက်ခံရ သူတိုင်း တခြားလိင်မှတဆင့် ကူး စက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကိုပါ စစ် ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဂနိုရောဂါက ရောဂါလက္ခဏာ တွေမေးမြန်းတာ၊ ဆီးစစ်တာ၊ လိင် အင်္ဂါကနေကျလာတဲ့အရည်တွေ စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။
ဂနိုရောဂါက လိင်ဆက်ဆံ ဘက်များတဲ့လူ၊ အကာအကွယ် (ကွန်ဒုံး) မသုံးတဲ့လူတွေမှာ အဖြစ် များပါတယ်။ အမျိုးသားများ ပွေရှုပ် ရာကတဆင့်လည်း ဇနီးသည်ဆီကို ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ လိင်မှတဆင့် ဒုတိယအများဆုံးကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကို အောင်မြင်စွာကုသပြီးလည်း အနေအထိုင်မဆင်ခြင်ပါက ထပ်မံ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
၆။ဂနိုရောဂါကိုမကုသရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ။
ဂနိုရောဂါက စောစီးစွာကုသ ခဲ့ရင် ယူပစ်သလိုပျောက်ကင်းနိုင် ပေမယ့် မကုသခဲ့ရင်တော့ နောက် ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေ နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါကိုမကုသဘဲထား လေလေ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုး တွေဝင်လာလေလေပါပဲ။ အမျိုးသမီး တွေမှာ ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့ပြီး တင်ပဆုံ တွင်းအင်္ဂါတွေ ရောင်ခြင်း pelvic inflammatory disease (PID)၊ ကိုယ်ဝန်လွဲမှား သန္ဓေတည်ခြင်း၊ မြုံခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် သည်အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျခြင်း၊ စောပြီးမွေးခြင်းနဲ့ ကလေးငယ်ဆီကို ကူးစက်ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်မီမကုသခဲ့ရင် ကလေးငယ်က တစ်သက်လုံး မျက်လုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသား တွေမှာ ဝှေးစေ့နဲ့ ဆီးကြိတ်နာကျင် ရောင်ရမ်းကာ မြုံသွားတဲ့အထိဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ တချို့လူတွေမှာ ဂနို ရောဂါပိုးက သွေးတွေထိပျံ့နှံ့ကာ ဦးနှောက် အမြှေးရောင်ရမ်းတာ၊ နှလုံးမြှေးရောင်ရမ်းတာ၊ ခါးဆစ် ခြေဆစ်လက်ဆစ်တွေ ကိုက်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးဆိပ်တက် ရောဂါရပြီး အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၇။ဂနိုရောဂါမဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ။
အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံ တာကို ရှောင်ရှားခြင်း၊ အမျိုးသား ကွန်ဒုံးသို့ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံးကို စနစ် တကျအသုံးပြုစေခြင်း၊ မိမိ၏လိင် ဆက်ဆံဘက်ကို သစ္စာရှိခြင်း လိင် ဖျော်ဖြေရေးပစ္စည်းများကို တစ်ဦး တည်းသုံးခြင်းတွေက ဂနိုရောဂါ ဖြစ်ပွားမလာအောင် ကာကွယ်နိုင် ပါတယ်။
၈။ဂနိုရောဂါမှာ ဘယ်ဆေးဝါးတွေ ပေးလေ့ရှိသလဲ။
ဂနိုရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆီးပြွန်အ၀ရောင်ခြင်း၊ သားအိမ် အ၀ရောင်ခြင်း၊ အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊ Ciprofloxacin500 mg ၁ပြား၊ဒါမှမဟုတ် Ofloxacin 400 mg ၁ပြား၊ ဒါမှမဟုတ် Levaquin® 500 mg ၁ပြားပေးနိုင်ပါတယ်။
• သာမန်ဂနိုရောဂါ၊ Ceftriaxone 500 mg IM ထိုးဆေး၁လုံး၊ ဒါမှမဟုတ် Cefixime 400 mg ၁ပြား၊ ဒါမှမဟုတ် Ciprofloxacin 500 mg ၁ပြား၊ ဒါမှမဟုတ် Ofloxacin 400 mg ၁ပြား၊ ဒါမှမဟုတ် Levofloxacin 250 mg ဒါမှမဟုတ် Penicillin မတည့်ရင် Spetinomycin 1 Gm IM ထိုးဆေး ၁လုံး၊ ဒါမှမဟုတ် Cefpodoxime 400 mg ၁ပြား၊ ဒါမှမဟုတ် Levofloxacin 250 mg တနေ့ ၁ပြား ပေးနိုင်ပါတယ်။
(ဂနိုရီးယား) ပိုးနဲ့ အတူ (ကလာမိုင်ဒီယား) ပိုးလဲတွဲရှိနေတာ က ၅၀% လောက်ရှိလို့ တခုကိုသာ မကဘဲ ၂ မျိုးလုံးတွဲပေးတာကောင်း တယ်။ (ကလာမိုင်ဒီယား) ပိုး အတွက်
• Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်၊ ၁၀-၁၄ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Zithromax® (azithromycin) 1.0 gm ကို ပထမနေ့သောက်ပြီး၊ 250mg ကို တနေ့ ၁ကြိမ်၊နောက် ၄ ရက်ဆက် သောက်ပါ။
ခေတ်မီ တိုးတက် လာသည့် အလျောက် ဆန်းပြားသော လျှပ်စစ် ပစ္စည်း များနှင့် လူ့အသုံး အဆောင် ပစ္စည်း များမှာ လည်း တစ်ခု ထက် တစ်ခု ပိုမို ကောင်းမွန် လာသည့် အတွက် လူအများ မှာလည်း အသစ် အဆန်း ဘက်ကို ဦးစားပေး ရွေးချယ် လာကြသည်။ ယခုခေတ်မြို့နေ လူငယ် အများစုဖုန်းကိုင် လာနိုင်ပြီး ဆွေ မျိုး သားချင်း၊ ချစ်သူ သမီးရည်းစား များ နှင့် ဖုန်းပြော သည့်အခါ ပုံမှန် အသံ db (decivel) ထက်ပိုသော အသံကို ကြားလျှင်ဖြစ်စေ၊ နေ့စဉ် ရက်ဆက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဖုန်းပြော လျှင်ဖြစ် စေ နားကို မထိခိုက် နိုင်သော်လည်း ပုံမှန် အသံထက် ကျယ်သော စကား ပြောသံ နှင့် အချိန်ကြာသော အခါ နား ထိခိုက် နိုင်ကြောင်း နား၊နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း ဆေးရုံမှ အထူးကု ဆရာ ၀န် ဒေါက်တာ ၀င်းထိုက် ကြည်က ပြောကြားသည်။
ဖုန်းကို တစ်နေ့တည်း ဆက် တိုက် ခြောက်နာရီ နှင့် အထက်ပြော ပြီး ဖုန်းပြောသံမှာ လည်း သတ်မှတ် ထား သော db (decivel) အသံထက် ကျယ်ရင် နားအူ၍ ထုံတတ် ကြောင်း၊ ပုံမှန် နားထောင် နိုင်စွမ်း ရှိသော အသံ နှင့် ပြောလျှင် နားကို မထိခိုက် နိုင် သော်လည်း ကြာရှည် လာချိန်တွင် နားလေး သွားနိုင် ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကြာရှည်စွာ ဖုန်းပြော တတ်သည့်လူ ငယ်များ၊ ဖုန်းပြော လျှင် အော်ပြော မှ ကျေနပ် ကြသည့် သက်ကြီးရွယ်အို များမှာ အသံ ကျယ်လောင် စွာ ဖုန်း ပြောခြင်း မှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ် ကြောင်း db (decivel) ၁၀၀ နှင့် အ ထက် ကျော်လျှင် နားလေး၊ နားအူ၊ ထုံတတ်ကာ နားကို လျင်မြန်စွာ ထိ ခိုက်မှုဖြစ်စေ နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လူငယ် အများစုမှာ အမြဲတမ်း ဆူညံ နေသော ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ကာလ အတန်ကြာ နေထိုင်ပြီး အလေ့ အကျင့် ရလာလျှင် သို့မဟုတ် ဆူညံ နေသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်း ခွင် တို့တွင် အလုပ်လုပ် နေချိန်၌ တ ဖြည်းဖြည်း နားလေး လာတတ်ကာ နှစ် အတန်ကြာမှသာ မိမိကိုယ် ကို နားလေးခြင်း ကို သိသည့် အတွက် ပြင်ဆင်ချိန် မရခြင်း၊ ထို့အပြင် နားအုံ၊ နားရင်းပြင်းပြင်း ထန်ထန် ရိုက်ခတ်မိ ပြီး အနာတရ ဖြစ်ခြင်း၊ နား အတွင်း အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ကူး စက် ရောဂါပိုး ၀င် ရောက်ပြီး နား ရောင်ရမ်းခြင်း များဖြစ်ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ နားလေး၊ ထုံထိုင်း ရောဂါ မဖြစ် စေရန် ပုံမှန်ပြောနေ db (decivel) ၆၀ နှုန်းဖြင့် နား ထောင်ကာ အလေ့အကျင့် လုပ်သင့် ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဖုန်းဖြင့် စကားပြော နေချိန်တွင် တစ်ဖက်မှ နားထောင် နိုင်စွမ်း ထက် ကျယ်သော အသံဖြင့် ပြောလျှင် နား အတွင်းပိုင်း ရှိ အာရုံခံ ဆဲလ်များ ကိုထိကာ ထုံထိုင်း တတ် ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဖြစ်လာလျှင် တိတ် ဆိတ်ငြိမ်သက်သော နေရာများတွင် တစ်ရက်မှ နှစ်ရက် အထိ အနားယူ သင့်ကြောင်း၊ မသက်သာ လျှင် နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကု ဆရာဝန် များနှင့် အမြန်ဆုံး ပြသ ကာ ကာ ကုသမှု ခံယူ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကု ဆေးရုံကြီး မှ သိရသည်။
လူခန္ဓာကိုယ်​တစ်နေ့တာ စွမ်းအင်တွေအတွက်​ မနက်စာသည်​ အဓိကအစားအစာဖြစ်​သလို မနက်​စာ​ကြောင့်​ စွမ်းအင်​လည်းရရှိ​စေပါသည်​ ။ မနက်စာ မစားမိခြင်း မစားခြင်း အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင်းမနက်စာ မစားလိုက်ဘူး ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သကြားဓာတ်ပမာဏ နည်းသွားပါသည်​ အဲဒီအခါ ခန္ဓာကိုယ်​မှာ အင်​အားစွမ်းအင် ရရှိမှု့
လူခန္ဓာကိုယ်​တစ်နေ့တာ စွမ်းအင်တွေအတွက်​ မနက်စာသည်​ အဓိကအစားအစာဖြစ်​သလို မနက်​စာ​ကြောင့်​ စွမ်းအင်​လည်းရရှိ​စေပါသည်​ ။ မနက်စာ မစားမိခြင်း မစားခြင်း အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင်းမနက်စာ မစားလိုက်ဘူး ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သကြားဓာတ်ပမာဏ နည်းသွားပါသည်​ အဲဒီအခါ ခန္ဓာကိုယ်​မှာ အင်​အားစွမ်းအင် ရရှိမှု့လျော့နည်းသွားပြီး ဦးနှောက် အလုပ် လုပ်ပုံကိုပါ ထိခိုက် လာစေသလို ​မောဟိုက်​လွယ်​ခြင်း ၊ ရင်​တုန်​ခြင်း ကုိယ်​လက်​မအိမသာဖြစ်​ပြီး စိတ်​မကြည်​ခြင်းပါ ဖြစ်​​ပေါ်လာနိုင်​သည့်​အတွက်​ မနက်​စာမစားမိခြင်းဖြစ်​ရပ်​ကို​ရှောင်​ခါ စားသုံးရပါမည်​ ။
ဆီများများအသုံးပြု့ခါ ချက်​ပြုတ်​ခြင်း၊ကြော်​​လှော်​မုန့်သ​ရေစာ​များ​ကြောင့်​ မိမိခန္ဓာကုိယ်​အ​လေးချိန်​ဝိတ်​​တက်​လာနိုင်​ပြီး စိတ်​ဖိအားကိုပါဖြစ်​​​ပေါ်နိုင်​သည်​ ။ ဒါ​ကြောင့် ​​ဆီ​ကြော်​အစားအစာများ ဆီပါဝင်​နှုန်းများ
သောအစားအစာများကို​လျှော့ခါ စားသုံးသင့်​ပါသည်​ ။
​ရေနှင့်​​ဖျော်​စပ်​ထား​သော အချိုရည်​များ ၊ ​သစ်သီးများကို​ရေဖြင့်​စိမ်​ထား​သော​ရေများကို များများ​သောက်​ပြီး ​ရေသီးသန့်​ ​ရေသန့်​​ရေ​သောက်​သုံးခြင်းနည်းပါက ဦး​နောက်​အတွင်​လိုအပ်​​သော ​အောက်​စီဂျင်​နည်းပါးသဖြင့်​
ဦး​နောက်​ကြည်​လင်​လန်းဆန်းမှု့ နည်းခြင်း ၊ ကိုယ်​အပူချိန်​ညီမျှ​ထိန်းသိမ်းစွမ်းအင်​နည်းပါးခြင်း နှင့်​အတူ အသားအ​ရေစို​ပြေမှု့အတွက်​ပါ ​လျှော့နည်းကျဆင်းပြီး ​ခြောက်​​စေပါသည်​ ။ ​ရေသီးသန့်​ကို များများ​သောက်​သုံးခြင်းသည့်​လည်း စိတ်​ကြည်​လန်းဆန်း​စေမှု့ဖြစ်​​ပေါ​စေပါသည်​ ။
ဟင်းချိုမုန့်​ ၊ သကြားနှင့်​ ဆားပါဝင်​များ​သော အစားအစာများ ၊ ဟင်းလျာများ စားသုံးတက်​ခြင်း အ​လေ့အထကို ​ရှောင်​ရှားစား​သောက်​သင့်​ပါသည်​ ။ အစားများခြင်းက သွေးဖိအားကို တိုးစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဇီဝဖြစ်စဉ်ကတစ်ဆင့် မိမိ၏ စိတ်ညစ်ညူးမှု ဖြစ်လာ​စေသလို ကိုယ်​စိတ်​မအီမသာဖြစ်​ခြင်း ၊ နှလုံး​ခုန်​မမှန်​ခြင်း ၊ ​ခေါင့်းမကြည်​ခြင်းဖြစ်​​ပေါ်​စေပါသည် ။ ​မိမိကျန်းမာ​ရေး​ရေရှည်​အတွက်ပါ ​ဆိုးကျိုးများစွာသာ ဖြစ်​​ပေါ​စေ​သော​ကြောင့်​ သတိချပ်​ခါ ​ရှောင်​ရှားစားသုံးသင့်​ပါ​တော့သည်​ ။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အာဟာရ ကျန်းမာရေး အထူးကုဆရာဝန် DR Win Win Myint ပေးပို့ထားပါတယ်။
Cholesterol (ကိုလက်စရော) များနေပြီဆိုရင် အောက်ပါ အချက်များ ကိုလိုက်နာရပါမည်။
• Keep to your ideal weight.(ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းသိမ်းပါ။)
• Takeahigh-fibre diet (အမျှင်ဓါတ်များသော အစာများကို ရွေးစားပါ)
• Eat fish at least twiceaweek (ငါး ကို တစ်ပါတ်လျှင် အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်စားပါ။)
• Restrict amount of fast food (ဟန်ဘာဂါ၊ ဟော့ဒေါ့ စသောအစာများကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကြဉ်ပါ။)
• Avoid deep-fried foods ( အကြော်အမျိုးမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။)
• Take regular exercise (လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ပါ။)
• Always trim fat off meat (အသားစားလျှင် အဆီ နှင့် အရေခွံ ကိုဖယ်ရှားပြီး မှ စားပါ။)
• Avoid snacks between meals (ချိုသော သရေစာစားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။)
• Drink more water (ရေများများ သောက်ပါ။)
• Do not smoke (ဆေးလိပ်လုံးဝ မသောက်ပါနှင့်။)
Ischaemic Heart Disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါရှိသူ၊ Ischaemic Stroke သွေးကြောပိတ်၍ လေသင်ဓုန်းဖြတ်ထားသူ၊ Hypertension သွေးတိုးရောဂါရှိသူ၊ Diabetes ဆီးချိုရောဂါရှိသူများလည်း အထက်ပါ အချက်များကို လိုက်နာရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။
DR Win Win Myint ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ဒေါက်တာရှင့် ကျွန်မအသက် ၆၀ ကျော်ပါပီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်ထဲက ညဆို နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မပျော်ပါဘူး ဆရာ။ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါသလည်း။ ကျွန်မမှာ ဆီးချိုရောဂါတော့ ရှိပါတယ် ဆရာ။
ဆီးချိုကြောင့် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မပျော်တာပါလား။
ကျွန်မပြသနေတဲ့ ဆေးခန်းက အိပ်ဆေးပေးပါတယ်ဆရာ။ ဆေးက ဝယ်ရခက်တဲ့ဆေးပါ။ ဆေးမသောက်ဘဲ အိပ်ပျော်ချင်ပါတယ် ဆရာ။ ကူညီပေးပါ။
ဒေါ်တင်တင်ဝေရဲ့ ပြဿနာကို သက်ကြီးပိုင်း အမျိုးသမီးအများစုမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရ၍ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ် အပြောင်းအလဲကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုးကဲ့သို့ ရောဂါတစ်ခုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးအဖြစ်သော် လည်းကောင်း၊ နေထိုင်မှု ပုံစံမမှန်ကန်မှုကြောင့်သော် လည်းကောင်း နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မပျော်ခြင်း ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ လိုအပ်တဲ့အိပ်ချိန်က တူညီလေ့ မရှိတာကြောင့် ဒေါ်တင်တင်ဝေ လိုအပ်တဲ့ အိပ်ချိန်ပမာဏကို ကိုယ်တိုင်သိထားဖို့ လိုအပ်တာက ပထမအချက်ပါ။ ဥပမာ- ည ၁ဝ နာရီအိပ်ရာဝင်ပြီး မနက် ၆ နာရီထလျှင် အိပ်ချိန် ၈ နာရီရ၍ ထိုအိပ်ချိန် ၈ နာရီမျှ အိပ်ရသည်ကို ခန္ဓာကိုယ်က ကြည်လင် လန်းဆန်းပါသလားဆိုတာကို သိသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်မပျော်သူတစ်ယောက်ဟာ-
(၁) ညစဉ်အချိန်မှန် အိပ်ရာဝင်၊ နံနက်အချိန်မှန် အိပ်ရာထတဲ့ အကျင့်လုပ်ပြီး နေ့လယ်ဘက်မှာ တစ်မှေးမျှ မအိပ်သင့်ပါ။
(၂) အိပ်ရာမဝင်ခင် ၃ နာရီအတွင်း အဆီအအိမ့်များ၊ ကဖင်းဓာတ်များ မသောက်သုံးသင့်ပါ။ အိပ်ရာဝင်ခါနီး ဗိုက်ဆာပါက ခရက်ကာ အနည်းငယ် သို့မဟုတ် ငှက်ပျောသီး တစ်လုံးခန့်စားပါ။ နွားနို့ပူပူ တစ်ခွက်သောက်နိုင်ပါတယ်။
(၃) စိတ်တို၊ စိတ်ညစ်စရာများ ရှိပါက အိပ်ရာဝင်ခါနီး ကြွက်သားများကို ခေါင်းမှခြေအထိ ဖြေလျှော့ပါ။ ရေချိုးကန်ရှိပါက ရေနွေးဖြင့် အတန်ကြာစိမ်ပြီး ရေချိုးပါ။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ အိပ်ရာမဝင်မီ တစ်နာရီအတွင်း လုပ်လက်စ အလုပ်မှန်သမျှကို ရပ်ပစ်ပြီး စာတစ်အုပ်လောက်ဖတ်ဖို့ပါ။ ဒါမှမဟုတ်သာယာ ငြိမ့်ညောင်းတဲ့ သီချင်း၊ တီးလုံးတွေကို နားဆင်ပါ။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ အိပ်ခန်းဟာ မပူလွန်း၊ မအေးလွန်းဘဲ ဆိတ်ငြိမ်နေပါစေ။
အိပ်ရာဝင်ပြီး နာရီဝက်ကြာသည့်တိုင် အိပ်မပျော်ပါက ဆက်မအိပ်တော့ဘဲ စာဖတ်ကြည့်ပါ။ (TV မကြည့်သင့်ပါ) မနက်ပြုလုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေအ တွက် စိတ်ပူ၊ စိတ်ထင့်နေတာမျိုး ရှိရင် ခေါင်းအုံးဘေးမှာ မှတ်စုနဲ့ဘော ပင်ထားခြင်းဖြင့် စိတ်ကိုဖြေလျှော့ပေးပါ။ ထိုမှတ်စုထဲမှာ ပူသမျှအ လုပ်တွေကို ချရေးထားရပါမယ်။ အိပ်ဆေးမသောက်ချင်တဲ့ ဒေါ်တင်တင်ဝေ အတွက် အထက်ပါ နည်းလေးတွေဟာ လွယ်လည်း လွယ်ကူပြီး အသုံးလည်း တည့်ပါစေကြောင်း၊ အိပ်၍မရသော ညပေါင်းကုဋေကုဋာကို ထားခဲ့နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
သင်ဖြတ်သန်းနေရသော နေ့စဉ်ဘဝကို တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုပြီး တိုးတက်ပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက် ဘာတွေကို လုပ်သင့်သလဲဆိုတာ သင်သိပါသလား။ အောက်ပါ အချက်များကို နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်နေ့စဉ် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဘဝကို ပိုမို အဓိပ္ပါယ်ရှိစေကာ တိုးတက်စေမယ့်အပြင် စိတ်ကော ကိုယ်ပါ ရွှင်လန်းတက်ကြွနေစေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ အချက်တွေလဲ သိပ်မပါတာကြောင့် လုပ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ။
၁။ သင်အချစ်အနှစ်သက်ဆုံး လူများအတွက် အချိန်ပေးပါ။
၂။ “ကျေးဇူးပြု၍ ….” နှင့် “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဆိုသော စကားနှစ်ခွန်းကို မကြာခဏဆိုသလို ပြောပေးပါ။
၃။ အားရပါရ ရယ်မောပါ။
၄။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်တဲ့အစာကို အနည်းဆုံး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် စားဖြစ်အောင်စားပါ။
၅။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့အတွက် အချိန်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ။
၆။ “ချစ်တယ်”ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောပေးပါ။
၇။ သီချင်း နားထောင်ပါ။
၈။ ကြင်နာမှုသဘောကိုဆောင်သည့် အပြုအမူများကို ကြုံသလို လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
၉။ သင့်တစ်ဦးတည်းနေကာ စဉ်းစားတွေးတောနိုင်ရန် အချိန်တစ်ခု သီးသန့်ဖယ်ပေးထားပါ။
၁၀။ အသစ်အသစ်တွေကို လေ့လာ သင်ယူပါ။
ကျောက်ကပ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဓာတ်ဆားတွေကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဆိုဒီယမ်ပမာဏ များလွန်းနေရင် သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပိုတက်စီယမ်ပမာဏများလွန်းရင် နှလုံးခုန်နှုန်း ပုံမမှန်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ဟာ ပုံမှန်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခါ လက္ခဏာရပ်တွေအနေနဲ့ ဆီးအရောင်ဟာ ပန်းရောင်သန်းခြင်း၊ လက်နဲ့ခြေထောက်တွေ ဖောရောင်ခြင်းနဲ့ ခါးနာခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုသန့်စင်အောင်လုပ်မလဲလေထုညစ်ညမ်းတဲ့အခန်းထဲ ခဏလောက်နေရုံနဲ့ ဆဲလ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အရည်တွေကို ဟန်ချက်ညီမျှအောင် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေရလို့ပါ။
ကျောက်ကပ်သန့်စင်အောင် တစ်နေ့မှာ ရေသုံးလီတာ အနည်းဆုံးသောက်ပါ။ ရေသောက်တာဟာ ဆီးကျောက်တည်ခြင်း မဖြစ်စေပါဘူး။
ကယ်လ်စီယမ်ဟာ Oxalate၊ ဖော့စဖိတ်နဲ့ တခြားဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်တဲ့အခါ ပုံဆောင်ခဲအသေးလေးတွေဖြစ်လာရာက ဆီးကျောက်တည်ခြင်းဖြစ်လာပါတယ်။ ဆီးကျောက်တွေ ပေါင်းစပ်သွားတဲ့အခါ ကျောက်ကပ်ကနေ အရည်စီးဆင်းမှုကို ပိတ်ဆို့သွားစေနိုင်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှု ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ရေသုံးလီတာအပြင် နေ့စဉ် လိမ္မော်ရည်တစ်ဖန်ခွက်ကိုပါ သောက်ပါ။
လိမ္မော်ရည်ဟာ ဆီးထဲမှာ Citrate ပမာဏများစေပြီး ဆီးအနည်ကျခြင်းလျော့ပါးကာ ဆီးကျောက်ဖြစ်ဖို့ ကယ်လ်စီယမ်ရဲ့ ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းလည်း လျော့ကျသွားပါတယ်။
ဘရိုကိုလီက ကင်ဆာကို အကာအကွယ်ပေးသည်။ ဘရိုကိုလီ အစိမ်းကပို၍ အာနိသင်ကို ဖြစ်စေသည်။ ယင်း၌ diinody lmethane နှင့် swforaphane ဓာတု ပစ္စည်း (၂) မျိုးက ကင်ဆာအကျိတ်များ ကြီးထွားခြင်းကို ဟန့်တားပေးသည်။ ဘရိုကိုလီကို ကျက်ရုံချက်ခြင်းက အူမကြီးကင်ဆာကာကွယ်မှုကို ပို၍ပေးစွမ်းသည်။ ဗီတာမင် C နှင့် (၂၀%)ွRDI ဖိုင်ဘာကို ရရှိစေ သည်။ ဗီတာမင် A, E, K နှင့် folate တို့ကို ရရှိစေပြီး အစာခြေဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ကိုယ်ခံအားကို ကောင်းစေ သည်။
၀မ်းချုပ်ခြင်းနှင့် အူသိမ်၊ အူမတို့ ပြဿနာကို မဖြစ်စေပဲ အူမကြီးကင်ဆာကို အကာအကွယ် ပေးသည်။ ယင်း၌ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်၊ ဖိုင်ဘာ၊ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်၊ မင်နရယ်၊ ဗီတာမင်များဖြစ်ကြသော beta carotene ၊ ဗီတာမင် C နှင့် E, pantothenic acid နှင့် မဂ္ဂနီး(စ်)တို့ <ကယ်စွာပါဝင်သည်။ အူမကြီးအတွင်းအဆိပ်အတောက် ဖြစ်ခြင်းကို လျော့ပါးစေသည်။ အခြားဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ် သည့် Phytosterols ကလည်း အူမကြီးကင်ဆာကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။
နေ့စဉ်စားပေးခြင်းဖြင့် ဒိန်ချဉ်၌ရှိသော probiotic bacteria က ကင်ဆာဖြစ်စေသော ကပ်ပါးကောင် များကို အကာအကွယ်ပြုစေသည်။ အူသိမ်များ၏ လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ကောင်းစွာဖြစ်စေပြီး ယင်း၌ပါဝင် သော ကယ်စီယမ်နှင့် ဗီတာမင် D ကိုလည်း လွယ်ကူစွာ စုပ်ယူနိုင်သည်။ Colon acidity ကို တိုးပွားစေသဖြင့် အစာကြေလွယ်ပြီး အစာအိမ်၊ အူမကြီးအတွင်း အဆီ (polyps) နှင့် အကျိတ်များဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေး သည်။
Selenium ကို လုံလောက်စွာ ရရှိစေပြီး cell mutation များဖြစ် ပေါ်ခြင်းကို လျော့ပါးစေသည့်အပြင် အဆိပ်အတောက်များကို ပယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ တူနာငါး (၃) အောင်စသည် (၆၀%) ရှိသော RDI-selenium ၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Omega 3,6နှင့် fatty acids ကိုပေးသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြု fat များသည် အူမကြီးကင်ဆာကို အကာအကွယ်ပေး နိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကြောင့် လူအများဆုံးဆေးရုံရောက်ကြပြီး သေဆုံးတဲ့အထိမတော်တဆအဖြစ် အမြင့်ကပြုတ်ကျတာနဲ့ ပြင်ညီပေါ်လဲကျတာတွေက ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက သတိပေးပြောဆိုကြပါတယ်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ လူတွေဆေးရုံရောက်၊ သေကျေရတဲ့ ပြုတ်ကျ၊ လဲကျမှုတွေ အဖြစ်များနေပေမယ့် အဲဒါတွေကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ အရေးပေါ်ကုသမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အလေးအနက် ပြောနေပါတယ်။ အမြင့်ကနေ မတော်တဆ ပြုတ်ကျမှုကြောင့် ၂၀၁၆ ခှုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး တစ်ခုထဲကို ရောက်ရှိလာသူပေါင်း (၂၈၀) ခန့် ရှိခဲ့ပြီး၊ ဒီအထဲက (၅၀) ခန့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာမို့၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးဆိုလျှင် ဒီထက် အများကြီး များနေလိမ့်မယ်လို့ ဒီကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ အခုလို အမြင့်က မတော်တဆ ပြုတ်ကျပြီး ဆေးရုံရောက်လာသူတွေ အများစုကတော့ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ဖြစ်ကြပြီး၊ ၇၅% ကနေ ၈၀% အထိ ရှိနေပါတယ်။ ဒုတိယအများဆုံးကတော့ အိမ်နဲ့ကျောင်းတွေမှာဖြစ်ကာ ၁၀% ကနေ ၁၅% ကျော်အထိ ရှိနေပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အမြင့်ကနေ မတော်တဆ ပြုတ်ကျတာတွေထဲမှာ အများဆုံး ဖြစ်ရတာက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဖြစ်ပြီး၊ အိမ်နဲ့အဆောက်အဦး ဆေးသုတ်တာနဲ့ သစ်ပင်တက် အလုပ်လုပ်ရတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အဓိက ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ လုပ်ငန်းခွင် ယန္တရားနဲ့ စည်းကမ်းခိုင်မာမှု၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေ အသုံးပြုမှုနဲ့ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းတာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ငြမ်းမခိုင်ဘဲ ပြိုကျတာ၊ အရက် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးတာကို စည်းကမ်းနဲ့မတားဘဲ အမြင့်တက်လုပ်ခိုင်းတာ၊ စိုစွတ်ပြီး မခိုင်တဲ့နေရာတွေအတွက် သတိပေးလက္ခဏာတွေ မချထားတာ၊ အလင်းရောင်အားနည်းပြီး မှောင်နေချိန်နဲ့ ညပိုင်းမှာ အလုပ်ခိုင်းတာ၊ ဖိုင်ဘာဦးထုတ်မဆောင်းတာ၊ သိုင်းကြိုး အသုံးမပြုတာ၊ အောက်အထိပြုတ်မကျအောင် ပိုက်ကွန်အကာအရံတွေ မတပ်ဆင်ထားတာ၊ အလုပ်သမားအသစ်ကို အတွေ့အကြုံမရှိခင် ချက်ချင်းအမြင့် တက်လုပ်ခိုင်းတာ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာ မတော်တဆ ပြုတ်ကျတာကနေ ကာကွယ်ဖို့ လုံခြုံရေး အဓိကဆိုတဲ့ Safety First နဲ့ အခြားစည်းကမ်းတွေ ကပ်ထားတာအပြင်၊ ဒါတွေကို လက်တွေ့လိုက်နာပေးဖို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ အဓိက လုပ်ဆောင်သင့်တာတွေကတော့ ငြမ်းကို ခိုင်အောင်ဆင်တာ၊ ခါးသိုင်းကြိုး လှေကားကြိုး တွေသုံးတာ၊ လှေကားတွေကို ခိုင်အောင်လုပ်ထားတာ၊ မြေကြီးပေါ် တိုက်ရိုက်ကျမသွားအောင် ပိုက်ကွန်တွေကာရံ ခံပေးထားတာ၊ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ဖိုင်ဘာဦးထုတ်၊ ခါးသိုင်းကြိုး၊ အထိန်းကြိုး၊ ဘိနပ်၊ ရောင်ပြန်ဝတ်စုံ စတာတွေကို အလုံအလောက်ထုတ်ပေးထားကာ ဒါတွေကို ဝတ်ဆင်ပြီးမှ အလုပ်ခွင်ဝင်ခွင့်ပေးတာတွေ လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြုတ်ကျနိုင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ ချောတဲ့နေရာ၊ မခြောက်သေးဘဲ စိုစွတ်နေတဲ့နေရာ၊ မခိုင်တဲ့နေရာ စတာတွေအတွက် သတိပေးလက္ခဏာတွေ ချထားပေးဖို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် တချို့ က အခုလို ပြုတ်ကျနိုင်တဲ့နေရာတွေကို မသိဘဲ ရောက်သွားတာကနေ ချောကျ၊ ကျွံကျ၊ ကျိုးကျ တာတွေ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု ရှိသူကိုသာ အမြင့်တက် လုပ်ခွင့်ပြုတာအပြင်၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ မူးတတ်တဲ့ လက္ခဏာရှိမရှိ ကြိုတင်ဆေးစစ်ပြီးမှသာ အမြင့်တက်ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းက သွေးတိုးတာ၊ သကြားဓာတ်နည်းတာနဲ့ အိပ်ရေးပျက်တာတွေကြောင့်လည်း ပြုတ်ကျတတ်လို့ပါ။ ဒါ့အပြင် မိုးတွင်းကာလ မိုးရွာနေချိန်မှာ စိုစွတ် ချောနေတာအပြင်၊ အလင်းရောင်ပါ အားနည်းနိုင်တာကြောင့်လည်း၊ အပြင်ထွက် အပေါ်တက်လုပ်တာတွေ လုပ်သင့်မသင့် ကြိုတင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ပေးထားသင့်ပါတယ်။
အမြင့်ကနေ မတော်တဆပြုတ်ကျတာတွေထဲမှာ ဒုတိယ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ အိမ်နဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ အိမ်တွေမှာ ၁၀% ခန့်ဖြစ်ကာ၊ ကျောင်းတွေမှာ ၇% ခန့် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အိမ်တွေမှာ အဓိက ဖြစ်ရခြင်းက လုပ်နေကျမဟုတ်တာတွေကို စွန့်စားလုပ်တာကြောင့်ပါ။ ဥပမာ အိမ်ခေါင်မိုး ကိုယ်တိုင်တက်မိုးတာ၊ ခုံတွေ စားပွဲတွေ အဆင့်ဆင့်ခုပြီး မီးချောင်းတက်ပြင်တာမျိုးတွေကြောင့် အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီလို မကျွမ်းကျင်တာတွေအတွက် ကျွမ်းကျင်သူကို လုပ်စေသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်နေလျှင်လည်း အထူးသတိထားကာ ခိုင်ခန့်တဲ့ လှေခါး၊ အကိုင်အတွယ် စတာတွေကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပေါ်ထပ် ဝရန်တာနဲ့ ပြူတင်းပေါက်တွေမှာ သံပန်းအကာအရံ တပ်မထားတာကြောင့် ကလေးနဲ့လူကြီးတွေ မတော်တဆ အမြင့်က ပြုတ်ကျတာတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတာမို့၊ ဒီသံပန်း ဒီအကာအရံတွေ တပ်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာတော့ ကစားကွင်းမှာ လျှောစီးတာ၊ ဒန်းလွှဲတာ၊ အမြင့်က ခုန်ချတာ၊ သစ်ပင်ပေါ်တက် ဆော့ကစားတာ စတာတွေကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိတာမို့၊ ကျောင်းကြီးကြပ်သူတွေ ဆရာ၊ဆရာမတွေအနေနဲ့ ဒီကစားကွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေ သင့်တော် ခိုင်မာမှုကို စစ်ဆေးတာ၊ ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပေးတာအပြင်၊ ကလေးတွေကိုလည်း အန္တရာယ်မရှိအောင် ကစားဖို့ ကြိုတင်သွန်သင်မှုတွေ၊ စောင့်ကြည့် ဆုံးမမှုတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ပိုမိုသိရှိ သတိထားလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ကိုဝင်းမင်း က ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ကုသမှုဌာနက ပါမောက္ခ ဌာနမှူး ဒေါက်တာမော်မော်ဦး ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
အရောင်ပါဝင်သော အသီးအနှံများကို စားသုံးခြင်းကြောင့် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု လျှောကျနိုင်
အမေရိကန်ဆေးပညာရှင်သုတေသီများ၏ လေ့လာတွေ့ ရှိချက်အရ အမျိုးသမီးများသည် ကာရိုတီနွိုက် အရောင်ပါဝင်သော အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စားသုံးပါက ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေနိုင်ကြောင့် လေ့လာတွေ့ ရှိရသည် ။
ဘရစ်ဂ၇မ်နှင့် ဟားဗတ်ဇ် ဆေးပညာတက္ကသိုလ်များမှ လေ့လာတွေ့ ရှိချက်အရ အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စားသုံးခြင်းကြောင့် သွေးထဲတွင် ကာရိုတီနွိုက်ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းပါဝင်မှု နှုန်းမြင့်မားနေလျှင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို လျှော့ချပေးနိုင်သည် ဟု တွေ့ ရှိရသည် ။
သခွာသီး ၊ ဖရဲသီး ၊ လိမ္မော်သီး ၊ မုန့် လာဥနီ နှင့် ကန်စွန်းဥ တို့ သည် ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းမြင့်မားသောအသီးအနှံများ ဖြစ်ကြောင့် သိရသည် ။
ဖရဲသီးကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီး အေးအေးလေး စားချင်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဖရဲသီးမှ အာဟာရဓာတ်တွေကို အပြည့်အဝရချင်ရင် ဖရဲသီးကို အအေးမခံဘဲ ဒီအတိုင်း အခန်းအပူချိန်မှာပဲထားပြီးစားတာကသာ အကောင်းဆုံးပါ။
အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ သုတေသီ တွေက အပူချိန် ၇၁-၉၁ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ ဖရဲသီးထဲမှာပါတဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ လိုင်ကိုပင်းဟာ ဆက်လက်တိုးပွား ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လိုင်ကိုပင်းသာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့နည်းခြင်းနဲ့ ဆက်စပ် နေပါတယ်။ ဖရဲသီးကို ၃၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ ခုနစ်ရက်ကျော်ကြာအောင် အေးခဲထားရင် အာဟာရဓာတ်တွေ ဖြည်းဖြည်းချင်း လျော့နည်းဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဖရဲသီးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကိုဝယ်ပြီး အဲဒီနေ့မှာပဲ ခွဲစားလိုက်ကြပါ။
ရေယုန်ရောဂါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များနေပြီး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှာ ဖြစ်လာလျှင် ကလေးကိုပါ ကူးစက်နိုင်ကာ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်တဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက သတိပေးပြောဆိုကြပါတယ်။
ရေယုန်ရောဂါဟာ Herpes Simplex Virus (HSV) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက ကူးစက်တာကြောင့် ဖြစ်ရပြီး၊ ပိုး နှစ်မျိုးရှိရာမှာ အတိုခေါက်အားဖြင့် HSV 1 နဲ့ HSV2လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တချို့ ကတော့ အပူရှပ်တာ၊ အရမ်းပူတာနဲ့ အစားအသောက် မှားတာကြောင့် ရေယုန်ဖြစ်ရတာလို့ မှားယွင်းယူဆမိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်သူမှာ အရည်ကြည်ဖု သေးသေးလေးတွေ ကိုယ်ခန္ဓာ ဘယ်နေရာမှာမဆို ပေါ်လာနိုင်ပေမယ့်၊ အများအားဖြင့် ပါးစပ်နားတဝိုက် (နှုတ်ခမ်း၊ နှာခေါင်း အပါအဝင်) နဲ့ လိင်အင်္ဂါတဝိုက် (တင်ပါး အပါအဝင်) ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းနားတဝိုက်ဖြစ်တဲ့ ရေယုန်က HSV 1 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး၊ လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်ဖြစ်တဲ့ ရေယုန်ကတော့ HSV2ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အမျိုးအစားကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာတွေ များလာတာကြောင့်၊ ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းမှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ HSV 1 က လိင်အင်္ဂါမှာ ဖြစ်လာတာနဲ့၊ လိင်အင်္ဂါမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ HSV2ကလည်း ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းတွေမှာ ဖြစ်လာတာတွေ များလာပါတယ်။ အထူးသတိထားဖို့က မွေးကင်းစ ကလေးတွေမှာ ရေယုန်ကူးစက်ခံရလျှင် ဆိုးဝါးတဲ့အဆင့်မှ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီရောဂါက နာကျင်မှုလည်းဖြစ်စေကာ၊ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လည်းဖြစ်တတ်ပြီး၊ ပြန်ဖြစ်လာလျှင် အလုပ်ပျက်၊ စိတ်ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းမှာ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေပေါ်လာလျှင် ကြည့်မကောင်းတာအပြင်၊ တွေ့တဲ့လူတွေကလည်း ဘာဖြစ်တာလဲလို့ ဝိုင်းမေးတတ်ကြပါတယ်။
ကူးစက်မှု အများဆုံး ရေယုန်အမျိုးအစားကတော့ HSV 1 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းနားတဝိုက်မှာ ရေယုန်ဖြစ်တာပါ။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ အလုပ်ခွင်အတွင်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ထိတွေ့တာ၊ မိဘကနေ သားသမီးကိုနမ်းတာ၊ အများသုံးပစ္စည်း (ဥပမာ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊ လက်သုတ်ပုဝါ၊ ပုဝါ) တွေ အတူသုံးရာကနေတဆင့် တစ်ဦးမှတစ်ဦး ကူးစက်ရတာပါ။ ရောဂါလက္ခဏာအနေနဲ့ နှုတ်ခမ်ထောင့်မှာ အရည်ကြည်ဖု သေးသေးလေးတွေ အစုလိုက်ပေါ်လာကို အဓိက တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ နေရာမှာ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ မပေါ်လာခင်၊ နာသလို စပ်သလို ဖြစ်လာတာတွေ ရက်အနည်းငယ်ကြိုပြီး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအရည်ကြည်ဖုလေးတွေက တစ်ပတ်ကနေ (၁၀) ရက်ခန့်အထိ ဆက်ပြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် (၁၀) ရက်လောက်အကြာမှာ အနာကျက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနာကျက်ပြီးချိန် အမာရွတ်မကျန်ဘဲ၊ ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကိုယ်ခန္ဓာ အာရုံကြောထဲမှာ ဆက်ကျန်နေတတ်ပါတယ်။ တချို့ ရောဂါပိုးရှိသူတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာတာ၊ နာကျင်လာတာတွေကြောင့် ဆရာဝန်ပြကာ၊ ဒီရောဂါရှိမှန်း သိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ လူနာတွေမှာတော့ ပိုးကူးစက်ခံထားရပေမယ့် ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ တိမ်မြုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီ HSV 1 ပိုးကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းနားတဝိုက် ရေယုန်က လူနာအများစုအတွက် နောက်တစ်ခေါက်ပြန် မဖြစ်တတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တချို့ တလေမှာတော့ အရင်ဖြစ်ပြီးသားနေရာ (သို့မဟုတ်) ဖြစ်ပြီးသားနေရာတဝိုက်မှာ ပြန်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အခုလို ပြန်ဖြစ်လာလျှင် ရောဂါက အရင်လောက်မဆိုးတော့ပါဘူး၊ ရောဂါလက္ခဏာတွေလည်း အရင်လောက် မပြင်းထန်ဘဲ အရင်ထက် သက်သာနေလေ့ရှိပါတယ်။ အဓိက ပြန်ဖြစ်စေတဲ့ အခြေအနေကတော့ အအေးမိတာ၊ တုတ်ကွေးဖြစ်တာ၊ နေလောင်တာ၊ ဓမ္မတာပေါ်တာ (ရာသီလာတာ) တွေနဲ့ ပတ်သက်နေလေ့ရှိပါတယ်။
HSV2ပိုးကူးစက်တာကြောင့် လိင်အင်္ဂါတဝိုက် ရေယုန်ဖြစ်ရာမှာ သားအိမ်ခေါင်းနဲ့ တင်ပါးနေရာတွေမှာလည်း ဖြစ်လေ့ရှိပြီး၊ လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့် အဓိက ကူးစက်ရတာပါ။ လိင်ကြောင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါ (ကာလသားရောဂါ) တွေထဲမှာ လိင်အင်္ဂါရေယုံ အမျိုးအစားကလည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါရှိသူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး (၂) ရက်ကနေ ရက် (၂၀) အတွင်း ဒီ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ လိင်အင်္ဂါတဝိုက် ပေါ်လာတာကို တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ HSV2ပိုးကြောင့် ပထမတစ်ကြိမ်ပျောက်ပြီး နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖြစ်လာသူတွေမှာတော့ အရင်ထက် ပိုမသက်သာဘဲ၊ အရင်ပုံစံအတိုင်း ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ အရင်ပထမတစ်ခေါက်မှာ စပ်လျှင် နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖြစ်တာမှာလည်း စပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဓိက ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ အနီကွက်တွေဖြစ်တာ၊ ယားတာ၊ နာတာ၊ စပ်တာ၊ ဆီးပူတာနဲ့ ပိုဆိုးလာတဲ့အဆင့်မှာ ကိုယ်လက်ကိုက်တာ၊ ဖျားတဲ့အထိ ဖြစ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖြစ်သူတွေမှာလည်း ပြန်မဖြစ်ခင်မှာ နာတာ၊ ယားတာ ရက်အနည်းငယ်ကြိုဖြစ်ပြီးနောက်မှ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အနာတွေကျက်သွားချိန်မှာလည်း HSV 1 ပိုးကြောင့် ဖြစ်သလိုပဲ အမာရွတ်မကျန်ပေမယ့် HSV2ဗိုင်းရပ်ပိုးက ကိုယ်ခန္ဓာ အာရုံကြောထဲမှာ ဆက်အောင်းပြီးကျန်နေတတ်ပါတယ်။ အခုလို ဆက်ကျန်နေရာကနေ ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းလာချိန်၊ စိတ်ဖိစီးမူများလာချိန်၊ ခုခံအားကျလာချိန်၊ လိင်ဆက်ဆံချိန်နဲ့ ဓမ္မတာပေါ်ချိန်တွေမှာ ဒီပိုးက ပြန်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီရောဂါ ကူးစက်မှုက ရောဂါလက္ခဏာပေါ်လာသူတွေကနေတဆင့် ကူးတာထက်၊ ရောဂါလက္ခဏာ မပေါ်ဘဲ တိမ်မြုပ်နေသူတွေကနေတဆင့် ကူးတာက ပိုများပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အရည်ကြည်ဖုတွေ မပေါ်ဘဲ၊ ပိုးအောင်းပြီးကျန်နေရာကနေ တခြားသူနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံချိန်မှာ ကူးစက်သွားစေတာက ကူးစက်မှုစုစုပေါင်းရဲ့ (၈၀) % အထိ ရှိနေတယ်လို့ သုတေသနလေ့လာချက်တွေမှာ တွေ့ရှိထားပါတယ်။
ဒီရောဂါကြောင့် နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်လေ့မရှိပေမဲ့၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိထားပြီး၊ အခုလို နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာခဲ့ရင် ပြင်းထန်တတ်တာမို့ အထူးသတိပြု ကုသဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းနားတစ်ဝိုက် ရေယုန်ကို အချိန်မီ မကုမိဘဲ မျက်စိကို သွားထိမိကိုင်မိရာကတဆင့် မျက်လုံးကို ကူးစက်သွားလျှင် မျက်လုံးကွယ်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ အရေးပေါ် အမြန်ကုသမှုခံယူဖို့ လိုပါတယ်။ အလားတူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ သားအိမ်ဝ ရေယုန်ပေါက်လာလျှင်လည်း မွေးလာချိန်မှာ ကလေးကို ကူးကာ မွေးကင်းစရေယုန် ဖြစ်သွားပါက၊ အသက်အန္ဓရာယ်ရှိတဲ့ အဆင့်ဖြစ်တာမို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ ရေယုန်ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ကြိုတင် အသိပေး ကုသမှုခံယူထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကင်ဆာရောဂါရှိထားသူ၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစားထိုးကုသမှုခံယူထားသူ (ဥပမာ အသည်း၊ ကျောက်ကပ် အစားထိုးထားသူ) တွေနဲ့ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းတဲ့ရောဂါ ရှိထားသူတွေမှာ ကိုယ်ခံအားနည်းတာကြောင့် ရေယုန်ပေါက်လာလျှင်၊ မူလ ပါးစပ်နားတဝိုက်နဲ့ လိင်အင်္ဂါနားတဝိုက်အပြင် တကိုယ်လုံးကိုပါ အရည်ကြည်ဖုတွေ ပျံ့ သွားနိုင်တာမို့ အထူးဂရုပြု ကုသမှုခံယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ပုံမှန် ကုသမှုအနေနဲ့ ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေး လိမ်းဆေးနဲ့ စားဆေးတွေ အဓိက သုံးပြီး၊ နာကျင်မှုနဲ့အခြားလက္ခဏာတွေအတွက် ရေခဲပတ်တင်တာ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးပေးတာနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးလိမ်းတာ သောက်တာတွေနဲ့ တွဲပြီး ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုခံယူလျှင် ပြန်ကောင်းသွားတာများပါတယ်။
ကာကွယ်နိုင်ရေးမှာတော့ ရေယုန်အတွက် ကာကွယ်ဆေး မပေါ်သေးပေမဲ့၊ ရောဂါရှိသူအနေနဲ့ အခြားသူတွေနဲ့ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့နိုင်မှုကို ရှောင်ကျဉ်ပေးတာ၊ အများနဲ့တွဲပြီး ပစ္စည်းတွေကို မသုံးတာ (ဥပမာ နှုတ်ခမ်းနဲ့ထိတွေ့နိုင်တဲ့ ရေခွက်၊ ဇွန်း၊ နှုတ်ခမ်းနီ)၊ ရောဂါရှိနေချိန် လိင်ဆက်ဆံမှု နားထားတာတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အားလုံးအတွက်လည်း တလင်တမယားလိင်ဆက်ဆံမှုစနစ်က အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အခြားသူများနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမိလျှင်လည်း အကာအကွယ် (ကွန်ဒုံး) သုံးတာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းကတော့ ဒီရောဂါရှိထားသူနဲ့ မထိတွေ့ မဆက်ဆံတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ ကိုဝင်းမင်း ကမြန်မာနိုင်ငံက အရေးပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦး ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
လစ်ဗာပူးလ်တက္ကသိုလ်မှ သု တေသီတွေဟာ ခြင်တွေကို နှိမ်နင်း ရာမှ ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုရှိနေ တဲ့ ဌက်ဖျားရောဂါကုသဆေးတစ်ခု ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး လက်ရှိကု သရာမှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့ ဆေးတွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကာ ဌက်ဖျား ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို တိုက်ဖျက်နိုင်လိမ့် မယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနရလာဒ်တွေကို The Lancet Infectious Diseases ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး Endectocide အုပ်စုဝင် Ivermectin ကို လက်ရှိသုံးနေတဲ့ dihydroartemisinin-piper- aquine (DP) ထဲမှာ ထပ်ပေါင်း အသုံးပြုတဲ့အခါ ခြင်တွေကို တိုက် ဖျက်နိုင်စွမ်း ပိုမိုကောင်းလာတယ် ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ ခြင်နဲ့ ပါရာစိုက်တွေကို နှိမ်နှင်းဖို့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစီအစဉ်တွေမှာ ထည့်သွင်းသင့်တဲ့ တွေ့ရှိမှုတစ်ခု လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Ivermectin ထပ်ထည့်ပေါင်းခြင်းဟာ ဌက်ဖျား ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို (၆၁) ရာခိုင်နှုန်း အထိ လျော့ကျစေတယ်ဆိုတာကို လည်း ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်တွေ အရ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Ivermectin ဆိုတာ ပါရာစိုက်တိုက်ဖျက် တဲ့ ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အခြား ရောဂါတွေကို ကုသဖို့အတွက်လည်း ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိပါ တယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏ ထက်နှစ်ဆ (သို့မဟုတ်) လေးဆမြင့် သည့်အထိအသုံးပြုလို့ ရနိုင်ပါတယ် လို့လည်း သုတေသနအသင်းက ခန့် မှန်းထားပါတယ်။ DP နဲ့ ပေါင်းစပ် ပြီးတော့ တစ်နေ့ကို (၁) ကီလိုဂရမ် မှာ Ivermectin 300mg နဲ့ 600mg သုံးရက်ကြားပေးကာ စမ်းသပ်ခဲ့ကြပြီး ရလာဒ်တွေအရ တော့ ဌက်ဖျားရောဂါကို တိုက်ဖျက်ဖို့ နဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ လက်နက်ကောင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သုတေသနတွေ ဆက် လက်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ် နေဆဲဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကြီးကို ဌက်ဖျားကင်းစင်လာ အောင် ဌက်ဖျားပိုးနဲ့ပါ ရာစိုက်တွေ ကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ သုတေသနတွေ လည်း လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဆေးဝါးဟာ အခြားပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ မတူညီ တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးရှိပြီး ဆိုလို တာက အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ ခြင် တွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်သလို ဌက်ဖျား ပိုးကာကွယ်တဲ့ ခြင်ထောင်နဲ့ အိမ် တွင်းဖျန်းဆေးတွေကို ယဉ်ပါးနေတဲ့ ခြင်တွေကိုပါ တိုက်ဖျက်နိုင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုထားပါတယ်။
လူခန္ဓာကိုယ်​တစ်နေ့တာ စွမ်းအင်တွေအတွက်​ မနက်စာသည်​ အဓိကအစားအစာဖြစ်​သလို မနက်​စာ​ကြောင့်​ စွမ်းအင်​လည်းရရှိ​စေပါသည်​ ။ မနက်စာ မစားမိခြင်း မစားခြင်း အ​ကြောင်း အမျိုးမျိုး ​ကြောင်းမနက်စာ မစားလိုက်ဘူး ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သကြားဓာတ်ပမာဏ နည်းသွားပါသည်​ အဲဒီအခါ ခန္ဓာကိုယ်​မှာ အင်​အားစွမ်းအင် ရရှိမှု့ လူခန္ဓာကိုယ် ​တစ်နေ့တာ စွမ်းအင်တွေအတွက်​ မနက်စာသည်​ အဓိကအစားအစာဖြစ်​သလို မနက်​စာ​ကြောင့်​ စွမ်းအင်​လည်းရရှိ​စေပါသည်​ ။ မနက်စာ မစားမိခြင်း မစားခြင်း အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင်းမနက်စာ မစားလိုက်ဘူး ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သကြားဓာတ်ပမာဏ နည်းသွားပါသည်​ အဲဒီအခါ ခန္ဓာကိုယ်​မှာ အင်​အားစွမ်းအင် ရရှိမှု့လျော့နည်းသွားပြီး ဦးနှောက် အလုပ် လုပ်ပုံကိုပါ ထိခိုက် လာစေသလို ​မောဟိုက်​လွယ်​ခြင်း ၊ ရင်​တုန်​ခြင်း ကုိယ်​လက်​မအိမသာဖြစ်​ပြီး စိတ်​မကြည်​ခြင်းပါ ဖြစ်​​ပေါ်လာနိုင်​သည့်​အတွက်​ မနက်​စာမစားမိခြင်းဖြစ်​ရပ်​ကို​ရှောင်​ခါ စားသုံးရပါမည်​ ။
​ရေနှင့်​​ဖျော်​စပ်​ထား​သော အချိုရည်​များ ၊ ​သစ်သီးများကို​ရေဖြင့်​စိမ်​ထား​သော​ရေများကို များများ​သောက်​ပြီး ​ရေသီးသန့်​ ​ရေသန့်​​ရေ​သောက်​သုံးခြင်းနည်းပါက ဦး​နောက်​အတွင်​လိုအပ်​​သော ​အောက်​စီဂျင်​နည်းပါးသဖြင့်​ ဦး​နောက်​ကြည်​လင်​လန်းဆန်းမှု့ နည်းခြင်း ၊ ကိုယ်​အပူချိန်​ညီမျှ​ထိန်းသိမ်းစွမ်းအင်​နည်းပါးခြင်း နှင့်​အတူ အသားအ​ရေစို​ပြေမှု့အတွက်​ပါ ​လျှော့နည်းကျဆင်းပြီး ​ခြောက်​​စေပါသည်​ ။ ​ရေသီးသန့်​ကို များများ​သောက်​သုံးခြင်းသည့်​လည်း စိတ်​ကြည်​လန်းဆန်း​စေမှု့ဖြစ်​​ပေါ​စေပါသည်​ ။
လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရပ်အမြင့် မတူကြပါဘူး။ အသက် တူပေမယ့်လည်း အရပ်ရှည်တဲ့သူက ရှည်ပြီး ပုတဲ့သူက ပုနေပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရပ်အမြင့်မှာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး ကျန်တဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက အခြားအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတွေဟာ အသက်အရွယ်တစ်ခုမှာ အရပ်ရှည်ထွက်တာ ရပ်သွားပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေဟာ အများအားဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေထက် ၃-၄ နှစ်ပိုစောပြီး အရပ်ရှည်ထွက်တာ ရပ်သွားတတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာ အသက် ၁၄-၂၁ နှစ်ကြား တစ်ချိန်ချိန်မှာ အရပ်ရှည်တာ ရပ်သွားပါတယ်။
ယောက်ျားလေးတွေ ကတော့ အသက် ၁၇-၂၅ နှစ်ကြာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အရပ်ရှည်တာ ရပ်သွားပါတယ်။
အပျိုဖော်၊ လူပျိုဖော်ဝင်ပြီးနောက်မှာ အရပ်ဆက်ရှည် နိုင်ပါသေးတယ်။ အရပ်ရှည်တာ လုံးဝရပ်မသွားခင် အချိန်အတွင်း အရပ်ဆက်ရှည် ချင်သေးရင်
(၁) ကောင်းမွန်မျှတတဲ့ အစာအာဟာရတွေ စားသုံးပါ။
(၂) လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ပါ။ ရေကူးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးစဉ် ဖင်ထိုင်ခုံကို မြင့်ထားခြင်း၊ ဘတ်စကတ်ဘောလိုမျိုး ခုန်တာတွေ ပါဝင်တဲ့ အားကစားတစ်ခုခု ကစားခြင်း၊ ဘားတန်းဆွဲခြင်း၊ တာတိုပြေးခြင်း၊ ကြိုးခုန်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ကန်ခြင်းစတဲ့ အားကစား တစ်ခုခုကိုလုပ်ပါ။
(၃) တစ်နေ့မှာ ၈-၁၀ နာရီအထိ အိပ်ပါ။
(၄) မှန်ကန်တဲ့ ကိုယ်ဟန် အနေအထား ရှိပါစေ။
(၁)မင်သော်ရွက်ကို ချေ၍လည်းကောင်း၊ ထောင်း၍လည်းကောင်း ပျော့ ဖတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရပါမည်။ ပြီးလျှင်နနွင်းအနည်းငယ်နှင့် သမ အောင်ရောပါ။
လူအများ အထူးသဖြင် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ပိုကြိုက်တတ်တဲ့ သကြားကို ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုတာထက် ပိုစားမိရင် ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်တွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေက သတိပေးပြော ဆိုကြပါတယ်။
သကြားကို လိုအပ်တာထက် ပိုစားမိရင် အဝလွန်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် နှလုံးနှင့်သွေးကြော ဆိုင်ရာ ရောဂါများနှင့် ဆီးချိုရောဂါအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ အရေပြား အိုမင်းလွယ်ခြင်းနှင့် ကြွက်သားပျက်စီးခြင်းများကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည် ။ နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ တွင် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ၊ ခြေထောက်နှင့်လက် သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ဦးနှောက်သွေးကြော ကျဉ်း လေဖြတ်ရောဂါနှင့် သွေးတိုးရောဂါ စသည်တို့ပါဝင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများတွင် မှတ်ဥာဏ်ကျခြင်း ၊ တွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်မှု စွမ်းအားကျဆင်းခြင်း၊ စိတ်ထိန်းချုပ်မှုယိုယွင်းလာခြင်း၊ သကြားကို စွဲလန်းသွားခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ သကြားကို လိုတာထက်ပိုစားမိသူများအနေဖြင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မရှိလျှင် အထက်ပါရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများသွားတတ်ပါသည်။ အားဖြည့်အချိုရည်များတွင်လည်း သာမန်သကြားထက် အဆပေါင်း (၂၀၀) ပိုများသည့် သကြားဓာတ်များကို အသုံးပြုထားသဖြင့် ပိုအန္တရာယ်ကြီးပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ သကြားကို လိုသည်ထက် ပိုမစားမိရန် ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ သကြားပမာဏကို သိထားသင့်ပါသည်။ တစ်နေ့လိုအပ်သော သကြားပမာဏမှာ အမျိုးသား တစ်ဦးအတွက် လ္ဘက်ရည်ဇွန်း (၉) ဇွန်းခန့်နှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် လ္ဘက်ရည်ဇွန်း (၅) ဇွန်း ခန့်ဖြစ်ရာ အထက်ပါ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ မဖြစ်စေရန်အတွက် ၄င်းပမာဏထက် ပိုမို မစားသုံးသင့်ပေ။
ဒီကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ ကိုဝင်းမင်း က အထွေထွေဆေးကုသမှု သမားတော်ကြီး ဒေါက်တာ မင်းစိုးဦး ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဂျော်ဂျီယာတက္ကသိုလ်မှ ပြုလုပ်ခဲ့ သော သုတေသနတစ်ခုတွင် အမျိုးသမီးများတွင် ပြီးပြည့်စုံ သော အလှတရားပိုင်ဆိုင်သည့်အသက်အရွယ်မှာ အသက် (၂၉)နှစ် အရွယ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည်ဟု အင်္ဂလန် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်သော ဒေးလီးမေးလ် သတင်းစာက ယနေ့ဖော်ပြသည်။
ဂျော်ဂျီယာတက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်များနှင့် ဘွဲ့ကြို ကျောင်းသားများသည် အမျိုးသမီးများ၏ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် နှင့် အလှတရားဖြစ်ပေါ်မှုကြား ဆက်စပ်မှုများကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှစတင်လေ့လာခဲ့ရာ အသက် (၂၉)နှစ် အရွယ် သည် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များအရ ပြီးပြည့်စုံသော အလှမျိုးဖြစ်ပေါ် စေသည့် အသက်အရွယ် မျိုးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည် ဟု အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်သော သတင်းထုတ်ပြန်ချက် တွင် ဖော်ပြထားသည် ။ ဂျော်ဂျီယာတက္ကသိုလ်က စိတ်ပညာ ရှင် မယ်လ်မိုရီက အသက် (၂၉)နှစ်အရွယ် တွင် အမျိုးသမီး များသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ဝဆုံးအခြေအနေ ရောက်လေ့ရှိ၍ ပြီးပြည့်စုံသော အလှ တရားပိုင်ဆိုင် လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဂျောဂျီယာ တက္ကသိုလ်မှ ထုတ်ပြန်သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များထဲတွင် အသက် (၂၉)နှစ်အရွယ်ရောက်မှ ပြီးပြည့် စုံသောအလှတရားကြောင့် အောင်မြင်သူဦးရေမှာ ၂၂ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း ၊ ကတ်တီပယ်ရီ၊ အေဗရီလာဗင်းတို့မှာ အသက် (၂၉)နှစ် အရွယ်၌ ပြီးပြည့်စုံသော အလှတရား ပိုင်ဆိုင်သူများထဲမှ စံပြအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
လက်ကိုအသုံးပြုပြီး အလိုအလျောက် မျက်နှာပင့်တင်နည်း
အဆင့် (၁) နဖူးမှ အရေးအကြောင်း များ ချောမွတ်သွားစေရန်
ခေါင်းငုံ့ထားသည့် အနေ အထားတွင် လက်ဝါး (၂) ဖက်ကို နဖူးပေါ်သို့ W ပုံ ပင့်တင်ပေးပြီး (၁) မိနစ်နေပါ။
အဆင့် (၂) မျက်ကွင်းညိုခြင်း၊ မျက်အိတ်တွဲခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျော့ကျသွားစေရန်
ခေါင်းငုံ့အနေအထားတွင် လက်ဝါး (၂) ဖက်ကို မျက်လုံးများ ပေါ်တွင် ပိတ်ထားပြီး ကြာရှည်စွာနေ ပါ။
အဆင့် (၃) ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့် ဆည်းပေးခြင်း
ခေါင်းငုံ့လျက်အနေအထား တွင် လက်ဝါး (၂) ဖက်ကို အနည်း ငယ်စီ ခွဲထားပြီး နှာခေါင်းနေရာကို ချန်လှပ်၍ ပါး (၂) ဖက်ပေါ်မှ အပေါ်ဖက်သို့ ပင့်တင်ပေးပါ။
အဆင့် (၄) V-shape ပေါ်စေရန် ပါး (၂) ဖက်အသားများ၊ မေးရိုး နေရာကို ရေဓာတ်ထိန်းထားခြင်းဖြင့် သေးသွယ် အောင် ပြုလုပ်နည်း
ခေါင်းငုံ့ထားသည့် အနေအထားတွင် မေးရိုး (၂) ဖက်ပေါ်သို့ လက်ဝါးတစ်ဖက်စီကို W ပုံ ပင့်တင် ထားပါ။ လက်ဝါး (၂) ဖက်ကို ပူး ထားရန်မလိုပါ။
အဆင့် (၅) မျက်နှာပေါ်၌ Lymp- hatic toxic အဆိပ်များ စုပုံခြင်းကို ပယ်ရှားရန်
နား (၂) ဖက်ပေါ်သို့ လက်ဝါး များကို W ပုံ အထက်သို့ပင့်ထားသည့် အနေအထားဖြင့် တင်းတင်းကလေး ဖိတင်ပေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းတိုင်း ခေါင်းငုံ့အနေအထားတွင် အနည်း ဆုံး (၁) မိနစ်ခန့်ထားပါ။
အ၀လွန်ခြင်းဟာ လေးဖက်နာ အဆစ်အမြစ်ရောင် ရောဂါရဲ့ ချို့ ယွင်းစေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ပိုမိုဆိုးရွားလာစေနိုင်ပါတယ်လို့ သု တေသနရလဒ် အသစ်တွေအရ သိရ ပါတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ကျ ဆင်းသွားခြင်းဟာ ထိုလူနာတွေ အတွက် သတိထားရမဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုပဲဖြစ်ပြီး မသန်မစွမ်းဖြစ်နိုင် ခြေအတွက် အန္တရာယ်များတဲ့ အနေ အထားတစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ လူနာတွေရော ဆရာဝန်တွေပါ ရောဂါရဲ့ အနေအထားအပေါ် အာရုံစိုက်နေစဉ်မှာ အဆစ်အမြစ် ရောင်လက္ခဏာတွေကို ပိုမိုဆိုးရွား စေတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အ၀လွန်ခြင်းကိုလည်း ဂရုတစိုက် ကုသသင့်ပါတယ်။
မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျသွားခြင်း ဟာ လူနာရဲ့အားနည်းလာမှုကို သတိပေးနေတာဖြစ်ပြီး နောက် မသန်စွမ်းမှုတွေ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ လေးဖက်နာအဆစ်အမြစ် ရောင် ရောဂါဟာ Autoimmune disease တစ်ခုပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရောဂါ ပိုးမွှားတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ ခုခံအားဆဲလ်တွေ အဆစ်အမြစ်၊ အရိုးနုရဲ့ နံရံတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အ ဆစ်အမြစ်တွေကို ရောင်ရမ်းလာစေ ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရိုးတွေ၊ အရွတ် တွေနဲ့ ကြွက်သားတွေကို တဖြည်း ဖြည်းနဲ့ ပျက်စီးလာစေပါတယ်။ အချိန်နဲ့အမျှ ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး နောက်ဆုံး မှာတော့ မသန်မစွမ်းဖြစ် စေခြင်းဆီသို့ ဦးတည်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသနအတွက် လေးဖက်နာ အဆစ်အမြစ်ရောင် ရောဂါသည် လူနာ (၂၅ယ၀၀၀) ကျော်ကို လေ့လာခဲ့ပြီး အ၀လွန်ခြင်း ရဲ့ သက်ရောက်မှုကိုပါ ထည့်သွင်း လေ့လာခဲ့တာပါ။ အ၀လွန်နေသူတွေ မှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ မြန်မြန် ဆန်ဆန်နဲ့ ဆိုးရွားလာပြီး ဒါဟာ အဆစ်အမြစ်တွေ ရောင်ရမ်းတဲ့ အဆင့်နဲ့ သက်ဆိုင်နေခြင်း မရှိတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ် တွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ ပိန်ပါးပြီးတော့ မရည်ရွယ်ပါဘဲနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းသွားတဲ့ လူနာတွေမှာ ရောဂါ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆိုးရွားလာ တတ်တယ်ဆိုတာပါ။ အ၀လွန်နေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ကျ တော့ စနစ်တကျ အလေးချိန်လျော့ချရာမှ ကောင်း ကျိုးတွေရရှိစေနိုင်ပေမဲ့လည်း ဒီ အတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်း လာသူတွေမှာတော့ ရောဂါအတွက် မကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နေ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ လေးဖက်နာ အဆစ်အမြစ်ရောင် ရောဂါသည် လူနာတွေမှာပုံမှန် ကျန်းမာစေတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့က အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ် ပြီး ဒီအတွက်လည်း ကုသမှုပြု လုပ်နေစဉ်မှာ အစီအစဉ်တစ်ခု အနေနဲ့ ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်လို့ သုတေသီတွေက အကြံပြုထားကြပါ တယ်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ( Dengue fever )
( သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထူးသတိပေးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး အသိများသိရှိစေရန် မကြာခဏတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ် ယခု ထပ်မံပြီး ဂရုစိုက်စေချင်လို့ သိသင့်တာကို ဆက်လျက် တင်ပြပေးပါသည် .... mg mandalay )
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို အားလုံးသိထားသည့် ခြင်ကြောင့်ဖြစ်သည့်ရောဂါတစ်မျိုးဘဲဖြစ်ပါတယ် အေးဒီစ် အမျိုးအစားသည်သာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်ခြင်ဖြစ်ပါတယ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နေသည့်လူတစ်ယောက်ကို ကိုက်လိုက်ပြီး ဌင်းခြင်သည့်နောက်တစ်ယောက်ကို ကိုက်လိုက်ပါက ကူးစပ်ခြင်းဖြင့် သွေးလွန်ုတုပ်ကွေးရောဂါ ထပ်မံကူးစက်ပြန့် ပွားပါတော့သည် ။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးစဖြင်သည့်အနေအထားတစ်ခုကိုပြောပြရရင် ရိုးရိုးပုံမှန်ဖျားသည့်အတိုင်းစဖြစ်လာပါတယ် အဲလိုချိန်မှာ ဝေဒနာခံစားရသူသည် တစ်ကိုယ်လုံးကိုက်လာပါတယ် အဲလိုဖြစ်နေသည့် ကလေးတွေက ခံစားမှု့ ကို မပြောတက်တော့ ဖျားနေသည့်ကလေးကို မိဘများက ပုံမှန်ဖျားနေသည့်အတိုင်းထင်ပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာလာလို့ မပျောက်နိုင်ဖြစ်လာတော့မှာ ဆေးရုံးကိုရောက်လာကြတာများပါတယ် ဒါကြောင့်လဲ မဖြစ်သင့်တာတွေလွန်တာတွေဖြစ်လာတော့ နောက်ဆက်တွဲ စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းစရာများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ် အခုတင်ပြသည့် အပိုင်းကို ကလေးမိဘများတိုင်း အထူးသိထားသင့်သည့်အချက်တစ်ခုပါ ။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးအမျိုးအစား (၃)မျုိုးဖြင့် တုပ်ကွေးကွေးကြပါတယ်။
(၁) Dengue Fever ကတော့ ပုံမှန်ဖျားနာ တုပ်ကွေးပါ
(၂) Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) ဒီအမှတ်စဉ်ကတော့ ပြင်းထန်းစွာဖြစ်ပေါ် နိုင်သည့်တုပ်ကွေးဖြစ်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သွေးယိုစိမ့်မှု့ အပိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ ပါ ။
(၃) Dengue Shock Symdrome အဆင့်ရောက်နေရင်တော့ နောက်ကျနေတယ်လို့ တောင် ပြောလို့ ရသည် ဖျားနာတုပ်ကွေးအမျိုးအစားများထဲ့က ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်လို့အထူးသတိထား ကြပ်မတ်ကုသရတော့သည့် အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် အလွန်ပင်အရေးသည်လို့ တောင် ဆိုလိုရပါတယ် ။
ကလေးငယ်တစ်ယောက်သည့် ပုံမှန်ဖျားနာခြင်းစဖြစ်ပြီး အပြင်းဖျားလိုက် သက်သလာလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး ကလေးတွေမှာ အဖျားကျတယ်ဆိုရင် ဆော့ကစားချင်သည့်စိတ်တွေဖြစ်လို့ ဆော့ပါတယ် ဒီရောဂါကြတော့ သွေးလန့် လို့ သာ အဖျားကျပြီး ကလေးမှာ မှေးနေပါတယ် အဲလို့ ဖြစ်နေပြီးဆိုရင် ရက်အနေအားဖြင့် ၃ ရက်ကျော်လာရင်တော့ မိဘများ ၊ အုပ်ထိန်းသူများအနေဖြင့် ဆေးရုံးဆေးခန်းသို့ ချက်ခြင်းသွားရောက်ကုသမှု့ ခံယူပါလို့ပြောကြားလိုပါတယ် ။
မလွန်ခင်က ကုသခြင်းဖြင့် အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်လို့ ပါဘဲ တစ်ချို့ မိဘတွေ မိတ်ဆွေတွေမှာ ဒါလေးတွေကောင်းတယ် သူတို့ တွေလဲ ဒါနဲ့ ပျောက်ကြတယ်ဆိုပြီး နားယောင်လိုက်တက်ကြပါတယ် အဲလိုမျိုးတွေ လျှောက်နေကြလို့ လဲ မဖြစ်သင့်သည့်ခံစားရသည့်လူတွေ မနည်းတော့ပါဘူး ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဆေးရုံးကိုသာ ကုသပါလို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါသည် ။